Bronze Bush, Case Cotton mpitsindroka Parts, Micron Cotton ampela - Noblefu
· Ny orinasa manarona 5,000m2. Manana hery be dia be ny teknolojia , tsara ny famokarana sy ny toe-piainana sy ny fandinihan-tsiny rehefa avy-varotra fanompoana. Ny fototra hampihatra dingana rehetra kalitaon'ny fitantanana
. Manana foibe 20sets CNC milina, 30 milentika Auto-CNC lathes sy ny fikosoham-bary, fandavahana, mitoto vary, sns fanapahana tariby feno milentika ny milina. Afaka ho tooling in-trano ary afaka manao ODM ho an'ny mpanjifa hafa. Isika koa fitaovana fanaraha-maso matihanina , toy ny CMM, hamafin Mpamantatra, hery Mpamantatra, roughtness Mpamantatra, sns mpanamboatra samihafa Afaka landihazo mpitsindroka faritra amin'ny CNC machining process.for JD landihazo mpitsindroka .. milina hafa koa izahay ho farany tamin'ny metaly faritra , toy ny Chrome / Nickel voapetaka, vovoka coating , anodiz tra sy ny loko.
JD ampela BEVEL Gear NBF-371626
JD-bazana amin'ny Bush NBF-NBF-111948
Cotton mpitsindroka milina fanasan-damba NBF278781
Cotton mpitsindroka Retainer Cap NBF275471